Ciyaaraha Olimbikada Adduunka Oo Lagu Furay London, Xilli Calankeena Uu Ka Dhex Muuqday. - jornalizem
Ciyaaraha Olimbikada Adduunka Oo Lagu Furay London, Xilli Calankeena Uu Ka Dhex Muuqday.
Ciyaaraha Olimbikada adduunka ee London ayaa xalay si rasmi ah loo furay, iyadoo calankeena Soomaaliya uu ka dhex muuqday munaasabaad oo ay indhaha ku hayeen malaayiin ruux oo daafaha caalamka kala jooga.
Ciyaaraha Olimbikada ayaa waxaa ka qeybgalaya in ka badan 16 kun ciyaaryahano oo matayala ilaa iyo 204 wadan.
Munaasabada furitaanka ayaa aheyd munaasab aad u qurux badneyd, islamarkaana Britian ay si aad ah uga shaqeyeen islamarkaana soo bandhigeen dhaqankooda iyo damaashaadkooda.
Bilowgii munaasabada, boqorada dalka Ingariiska Queen Elizebeth ayaa ka soo muuqatay filim yar oo uu dhinac ka jilaayo Daniel Craig oo matalayay doorkiisa James Bond.
Isagoo u labisnaa sida uu ku jilo 007 ayuu soo galayaa Buckingham Palace iyadoo boqorada ay ku fadhiso miis xafiiseedkeeda shaqada, waxaana ay leedahay “Good evening, Mr Bond”. Taasoo dadka ka daawanayay garoonka munaasabada hal mar wada kicisay.
Ciyaaryahanka David Beckham ayaa isna sidoo kale qeyb ka qaatay munaasabada furitaanka isagoo shuclada ku keenay dooni dheereysa.
Halka sidoo kale uu ka soo muuqday feeryahanka ugu caansan adduunka Mohamed Ali Kalaay.
Fanaaniin iyo aktaro kale oo caan ah ayaa sidoo kale ka qeybgashay furitaankii ciyaaraha Olimbikada adduunka.